Sarimiaina Efatra Mandala Ny Fifandeferana Ara-pivavahana Sy Ny Fiarovana Ny Ankizy Mpitsoa-ponenana ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Sarimiaina Efatra Mandala Ny Fifandeferana Ara-pivavahana Sy Ny Fiarovana Ny Ankizy Mpitsoa-ponenana ao Myanmar
Voadika ny 16 Novambra 2016 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Pikantsarin'ny lahatsary fampitandremana momba ny fanavakavahana ara-pivavahana sy ny resaka fankahalana an-tserasera misy fiantraikany ratsy ara-tsosialy . Sary: YouTube
Tamin'ny taon-dasa, nasongadin'ny [mg] Global Voices ny asan'ny Equality Myanmar [Fitovian-jo Myanmar], fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana namokatra fitaovana ho an'ny haino aman-jery marolafy mba hampiroboroboana ny zon'olombelona ao Myanmar.
Nanasongadina lahatsary miaina dimy izahay izay manazava amin'ny endrika tsotra nefa vaovao ny fiantraikan'ny herisetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Ny lahatsary ihany koa dia mikendry ny hanabe ireo mpijery ny amin'ny fomba mahomby hanoherana ny fanjakazakana ary hankaherezana ny sehatra voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina.
Manolotra lahatsary efatra hafa indray izahay izay miresaka ny maha-ilaina ny fanamafisana ny fanentanam-baovao mba hiadiana amin'ny tsy fifandeferana ara-pivavahana sy ny fitongilanana ara-poko ao Myanmar .
Rehefa nirotsaka tamin'ny tetezamita demokratika i Myanmar dia voahozongozon'ny firongatry ny ekstremisma [mpitrifana] ara-pivavahana nampiahiahy sy ny fankahalana vahiny ilay dingana tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Nisy fifandonana tsindraindray teo amin'ireo Bodista nasionalista sy ny vondrona miozolomana vitsy an'isa tao amin'ny vondrom-piarahamonina maro, indrindra fa tany amin'ny faritra andrefan'ny firenena. Namindra toerana miozolomana an'arivony sy vondrom-poko vitsy an'isa hafa ny firongatry ny herisetra . Mandritra izany fotoana izany, nanamafy ny tsy fifandeferana sy ny tsy fandeferana ara-poko ireo teny fankahalana tao amin'ny media sosialy izay nahatonga ireo vondrom-piarahamonina vitsy an'isa ho lasibatra.
Nanomboka hetsika isan-karazany ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena ao Myanmar mba hampiroboroboana ny filaminana, ny rariny, sy ny fifandeferana. Na dia ireo mpisera aza dia navitrika tamin'ny fanoherana ireo teny fankahalana . Fomba tena ilaina mba hanamafisana ny foto-kevitry ny zon'olombelona misy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ny fampiasana ireo sarimiaina.
Maneho ireo olana manan-danja izay natao ho mora azon'ny mpijery ireo lahatsary avy amin'ny Equality Myanmar [Fitovian-jo Myanmar]. Ohatra, mampahatsiahy ny mpijery momba ny vokatry ny fampielezam-baovao diso amin'ny fanapariahana fankahalana ao amin'ny fiaraha-monina ity lahatsary momba ny fahasamihafana ity:
Ao anatin'ity lahatsary ity, niray hina namonjy sy nizara fanampiana ho an'ireo tra-boina ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo misolotena ireo fivavahana samihafa. Fomba tsotra kanefa fampahatsiahivana mahery vaika ho an'ny olona manana finoana samy hafa fa afaka miaina sy miara-miasa ao anatin'ny filaminana tsara izy ireo:
Manazava ity lahatsary ity fa afaka manaisotra ny zon'ny tanora hieritreritra malalaka sy hamorona ny fanavakavahana:
Farany, mampiseho ny tolon'ny ankizy mpifindra monina izay noterena handositra ny tranony ity lahatsary ity. Manamafy ilay lahatsary fa ilaina ny,mahatakatra ny manjo ireo mpitsoa-ponenana sy ny fidiran'ny fanjakana an-tsehatra mba hamonjena ireo ankizy mpifindra monina avy amin'ny fanondranana olombelona an-tsokosoko. Loza mitatao iray hafa izay asehon'ny lahatsary ihany koa ny toe-tsaina manavakava-bolokoditra ataon'ireo mponina an-drenivohitra: